Mahery fo ny vehivavy – Blaogin'i Voniary
Tsy dia fantatro loatra ny niavian’ilay fiteny hoe “fanaka malemy”. Tsy dia hampitaha ny herin’ny vehivavy sy lehilahy loatra ihany koa no tanjoko. Tsy izany velively, fa te hanaitra ny sainao aho, ianao vehivavy io, fa be herim-po ianao. Raha zohina tokoa manko ny fiainan’ny andriambavilanitra: ny dingana lalovany sy ny olana sedrainy amin’ny maha vehivavy azy dia fehezanteny iray no mahafehy azy: mahery fo ny vehivavy.
Vonona ny ho reny
Na Malagasy na Vazaha, na tambanivohitra na tandrenivohitra, na mpanankarena na mahantra, fotoana iray ahatsapana ny herim-pon’ny vehivavy ny fiatrehana ny fiterahana. Vao manomboka amin’ny fitondrana vohoka aza dia efa hita taratra izany.
Fihetsika masina loatra ny faneken’ny ampela iray hitondra ao an-kibony ilay aina vao notorotoronina. Firifiry moa ireo manapa-kevitra haningotra dieny eny am-piandohana, ny fisian’ilay menaky ny ainy? Hakanosana! Tahotra! Ao anefa ireo manolotra ny vatany hivimbinana ity sombiniaina ao anatin’ny folo volana maninjitra. Mety hoe vitsy ihany io isam-bolana io raha oharina amin’ny fotoana iainana eto an-tany. Mahery vaika anefa ny fiovana ara-batana iainana mandritra io ampahan-taona io. Ao ireo malemilemy sy maloiloy, tsy mahatelin-kanina. Misy ireo safotra matetika. Ary eny an-dàlana eny, maro ny trangan-javatra izay manelingelina ny fahasalamana. Ny harerahana moa tsy lazaina intsony. Izany indrindra no ilazako hoe fihetsika masina loatra ny faneken’ny andriambavilanitra iray hitondra aina ao an-kibony.
Miatrika ilay andro iray
Eny amin’ny trano fiterahana eny no toerana iray ahitana indrindra ny herim-pon’ny vehivavy. Ampela isan-karazany: na kely na vaventy, na manifinify na dongadonga, na manan-karena na mahantra, no miasa dia eny an-dalan-tsara rehetra eny. Mandeha miadana toa zara raha hamindra, miato kely, mitangolingolika, miondrika, miankin-drindrina avy eo mitraka mitam-balahana. Ny tarehy amin’izany mivaloharika tanteraka, tsy ahitana piti-tsiky mihitsy. Toy izany ny sarisary ankapobeny hita eny amin’ny hopitaly fiterahana.
Ekena fa hoe “bevohoka tia tsakotsako ka ny andro iray no tsy laitra”. Saingy na ny mankafy tsikanonkanona na ny miafy tsy mihinana dia tsy maintsy hangirifiry sy hijalijaly ihany amin’ilay andro iray. Eo indrindra no mihatra ilay fitenenana hoe “miankin-drindrina irery” sy “misotro ny rano tsy tiana”. Adim-pamataranandro maromaro no miaritra fanaintainana ny vehivavy iray rehefa mihetsi-jaza. Na eo aza ny vady, ny rahavavy, ny reny na ny rafozana manohana akaiky dia samy mahalala ny rehetra fa tsy misy afa-tsy izy, hiteraka, izy irery ihany no afaka mizaka ilay kaikitra maharary ao an-kibony ao.
Ary rehefa migadona ilay minitra hamoahana ity zazakely, misikim-ponitra izy, manangona ny heriny rehetra mba hizotra an-tsakany sy an-davany izany. Na eo aza ny arerahana sy ny fanaintainana dia mampiasa izay tanjaka ananany izy mba ho tonga soa aman-tsara ny vahiny keliny. Moa va tsy toy ny miaramila miatrika ady, ady goavana farany mihatra aman’aina!
“I Neny nitaiza, nibaby, nanasa”
“Tsy afaka mankaiza fa mitaiza”. Izay indray no ilazana ny vehivavy rehefa iny tonga iny ilay menaky ny ainy. Ny reny manko no tompon’andraikitra voaloany amin’ny fitaizana ny zazakely. Ny reny ihany koa anefa no tokony hikarakara ny tokantrano. Tsy vitan’izany fa ny andraikitra amin’ny maha vady azy mbola eo ihany koa. Amin’ireny fotoana ireny indrindra no ahatsapana ilay “fola-damosina”.
Torimaso tsy ampy, vatana mangorangoran’ny havizanana ary fanaintainana maro. Izany no iainan’ny reny tera-bao ao anatin’ny volana maromaro. Na eo aza izany dia mitaiza sy mampinono ny zanany izy ary tsy mitsahatra maneho fitiavana ny ankohonany.
Taloha dia nitaiza ary nanao lahasa ao an-trano sy eny an-tsaha no andrasana amin’ny vehivavy. Ankehitriny kosa mandray anjara amin’ny asa fiveloman’ny tokantrano izy ary manana ny nofinofiny manokana ihany koa. Izany rehetra izany no tsy maintsy sahaniny miampy ny fikarakarana ny ankohonany. Mino aho fa fanomezana manokana avy amin’ilay Nahary no afahan’ny andriambavilanitra mandamina sy miatrika ireo rehetra ireo.
Manoloana izany rehetra izany anefa miezaka ny ho miramirana lalandava i Neny ao an-tokantrano, mitsikitsiky foana anefa izy rehefa eny an-dàlana eny. Hery sy fahefana manokana ananan’ny vehivavy izany! Taratr’ilay herim-po ananany!
Koa na inona na inona lazaina mikasika anao ry vehivavy, na inona na inona fanapempoana atao anao ry Neny, Mama, tsarovy fa mahery fo ianao matoa sahy sy afaka misedra ireny rehetra ireny.
bevohoka, fanaka malemy, fiterahana, reny, sambatra, vehivavy malagasy
Un commentaire sur “Mahery fo ny vehivavy”
Aloka Anjely dit :